Nepal Auto | धेरै कम्पनीहरुले ओईएमको रुपमा हाम्रै उत्पादन मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्
धेरै कम्पनीहरुले ओईएमको रुपमा हाम्रै उत्पादन मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् 18 kartik, 2075
डाइरेक्टर, केसीआई बेरिङ्स (इन्डिया) लिमिटेड
भविन गदानी केसीआई बेरिङ्स (इन्डिया) लिमिटेडका डाइरेक्टर हुन् । नेपालमा कामना अटोमोटिभ्सले केसीआई बेरिङ्सका विभिन्न उत्पादनको आधिकारिक वितरकको कार्य गरिरहेको छ । केही समय पहिले कामना अटोमोटिभ्सको मेकानिक्स मिटको अवसरमा नेपाल आएको सन्दर्भमा गदानीसँग गरिएको कुराकानी :
केसीआई बेरिङ्स कस्तो कम्पनी हो ?
केसीआई बेरिङ्सले ७० को दशकमा बेरिङ उत्पादन थालेको थियो । यद्यपि कम्पनीको स्थापना त्यो भन्दा पहिले नै भएको थियो । हाम्रो हजुर बाले सन् १९५० को दशकमा कम्पनीको स्थापना गर्नुभएको थियो । यसको कारखानमा गुजरातको सुरेन्द्रनगरमा छ ।
हामी अटोमोबाइल र टेक्सटाइल बेरिङ उत्पादन गरिरहेका छौ । अटोमोटिभ क्षेत्रमा ट्रान्समिसन, ह्विल, इन्जिन, प्रोपेलर साफ्ट ज्वाइन, स्टेयरिङ, सस्पेन्सन, क्लच रिलिज र प्रिसिजन कम्पोनेन्ट गरी सबै रेन्जका बेरिङ उपलब्ध गराउछौ । टेक्सटाइलमा पनि हाम्रा विभिन्न रेन्ज छन् ।
भारतमा हाल बजारको अवस्था कस्तो छ ?
भारतको बेरिङ बजारमा हाम्रो सेगमेन्टमा करिब ६० प्रतिशत बजार हाम्रै कम्पनीको उत्पादनले ओगटेको छ । धेरै कम्पनीहरुले ओईएमको रुपमा हाम्रै उत्पादन मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अटोमोबाइल बेरिङको क्षेत्रमा हामी लिडिङ कम्पनी हौ । १९७५ मै भारतीय राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत भएको कम्पनीको रुपमा समेत परिचित भएको कम्पनी भएकाले पनि हाम्रो कम्पनीको विश्वसनियता बढेको मान्न सकिन्छ । टाटा मोटर्स र मुख्य भारतीय अटोमोबाइल निर्माता कम्पनीहरुसँग हामी ओईएमको रुपमा बेरिङ उपलब्ध गराइरहेका छौ । कार, एलसीभ, एचसीभी, हेभी सबैमा हाम्रो उपस्थिति छ ।
अन्य कुन कुन देशमा निर्यात हुन्छ ?
हामीले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका लगायतका एसियाली देशहरुमा निर्यात गर्छौै ।
नेपालमा आफ्नो उत्पादन उपलब्ध गराउनका लागि कामना अटोमोटिभ्सलाई किन रोज्नु भयो ?
कामनाको टिम व्यवस्थित छ । मेहनती कर्मचारीहरुको टिम छ । युवाहरुको टिम छ । कुनै उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सम्भव भए जति कार्य गर्ने उत्सुकता भएको कम्पनी हो । यसका लागि सबै क्षमता कामना अटोमोटिभ्ससँग भएको तथ्य बुझेर नै हामीले यसलाई रोजेका हौं ।
आगामी दिनमा नेपालमा बजार विस्तारका लागि थप कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?
हामी कामना अटोमोटिभ्ससँगको सहकार्यमा तेस्रो वर्ष काम गरिरहेका छौ । हामीसँग भएका अटोमोटिभ्स र टेक्सटाइल सेगमेन्ट मध्ये कामनाले अटोमोटिभ्सको कारोबार गरिरहेको छ । अब हामी यसका लागि विभिन्न योजना बनाइरहेका छौ । हाम्रो यो पहिलो भ्रमण हो । कम्पनीको टप म्यानेजमेन्टको तर्फबाट भएको पहिलो भ्रमण भएकाले पनि हामी आगामी दिनमा विस्तृत योजनाका साथ अगाडि बढ्ने छौ ।
नेपालको बेरिङ बजारमा कस्तो सम्भाव्यता देख्नुभएको छ ?
हाल सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । तर कामनाले राम्रो गरिरहेको छ । नेपालमा धेरै सम्भावना देखिएको छ । कामनाको बिजनेस मोडलले नै हाम्रो बजारलाई माथि उठाउन सहयोग गर्ने देखेका छौ । कामनाको धेरै बिजनेस एसोसिएटहरुसँग सम्बन्ध छ । त्यसपछि हाम्रा उत्पादनमा गुणस्तरीयता छ । दुवै कुरा मिले पछि बजार पनि राम्रो नै हुनेछ ।
४ वर्ष देखि नेपालमा सफल परीक्षण भइसकेको छ
हाम्रै उत्पादन रुचाउनुको कारण गुणस्तर